VaMugabe Vanoti Vachatambira Zvinobuda Musarudzo
Chikunguru 30, 2013
HARARE, WASHINGTON — Mutungamiri wehurumende, VaRobert Mugabe, vanoti vachatambira zvichabuda musarudzo dziri kuitwa neChitatu.
Vachitaura nevatori venhau muHarare neChipiri, mutungamiri weZanu PF akatiwo pane zvinhu zviviri zvinobuda musarudzo zvinoti kukunda nekukundwa vachiti munhu wese anofanirwa kutambira zvinenge zvaitika.
VaMugabe vanoti vanenge vasina kugutsikana nezvinenge zvabuda musarudzo vanofanirwa kutevedzera mitemo yenyika nekuendesa zvichemo zvavo kumatare.
Panyaya yemauto anogara akataura kuti haasi kuzotungamirwa nemunhu asina nhoroondo yehondo, VaMugabe vati havasi mauto ose ane pfungwa dzakadai. Vatiwo mauto anoshanda ari pasi pemutemo, uye anofanirwa kutevedzera mitemo yenyika mukuita basa rawo.
VaMugabe, avo vatungamira nyika kubva muna 1980, vanotiwo bato ravo riri kukunda musarudzo idzi.
Vatorawo mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga.
Muna 2008, VaMugabe vakakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika nemutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, asi vakatadza kuenda kuState House nekuti vakatadza kusvitsa huwandu hwemavhoti hunotambirwa nemutemo kuti munhu agadzwe semutungamiri mutsva.
Izvi zvakaita kuti munyika muite sarudzo yemutungamiri wenyika yepiri, iyo yakazosara VaMugabe vava vega mushure mekunge VaTsvangirai vabuda musarudzo iyi vachiti vatsigiri vavo vari kupondwa neZanu PF.
Gakava iri rakazopa kuti munyika muve nehurumende yemubatanidzwa, iyo yashanda kwemakore mashanu pasina kuwirirana kunyange hazvo yakaunza kugadzikana munyika.